MOETHIHAAUNG: "သူတောင်းစား နဲ့ ဘုန်းကြီး "
ဆရာတော်အစဉ်အဆက်က ပြောပြခဲ့တဲ့ ဓမ္မပုံ ဝတ္တုလေးတစ်ပုဒ်ကို အရင်ပြောရအောင်ပါ ။
တစ်ခါတုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းကို သူတောင်းစားတစ်ယောက် ရောက်လာပါတယ် ။
ကျောင်းပေါ်ရောက်တော့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးကို အသင့်တွေ့တာနဲ့ . .
"ဘုန်းကြီးဘုရား , ဆွမ်းကျန်လေးများရှိရင် စွန့်ပါ ဘုရား"
ဒီတော့ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးက. . .
"မင်းမှာ ခြေ,လက် အကောင်းကြီး ,ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်စားပါလား ? ဘာဖြစ်လို့ တောင်းစားနေရတာလဲ ? သွား မပေးနိုင်ဘူး , အခု ဆင်းသွား " လို့ ခပ်ငေါက်ငေါက်လေး ပြောလိုက်ပါတယ် ။
သူတောင်းစားက ချက်ချင်းမဆင်းသေးဘဲ လက်အုပ်ကလေး ချီပြီး. .
"ဘုန်းကြီးဘုရား , တပည့်တော် အခုပဲ ဆင်းပါ့မယ် ဘုရား ၊ မဆင်းခင် လင်္ကာလေးနဲ့ ကန်တော့ပြီး ဆင်းပါရစေဘုရား"
ဘုန်းကြီးကလည်း ဆွမ်းစားခါနီးနေပြီဆိုတော့ " မင်းကန်တော့မှာဖြင့် မြန်မြန်ကန်တော့ , ကန်တော့ပြီးရင် ဆင်းတော့" လို့ ခပ်မာမာလေး ထပ်ပြောလိုက်တယ် ။
သူတောင်းစားလည်း စောင့်ကြောင့်ကလေးထိုင် ၊ လက်အုပ်ကလေး ချီပြီး . . .
-ရှေးကကောင်းလို့ ခုကောင်းပါသည် ၊
-ခုကောင်းရင် နောင်ကောင်းပါလိမ့်မည် ၊
-ရှေးကမကောင်းလို့ ခုမကောင်းပါသည် ၊
လို့ ဆိုပြီး ကန်တော့လိုက်ပါတယ် ။ ကန်တော့ပြီး ပြန်ဆင်းမယ်လည်း လုပ်ရော ဘုန်းကြီးက. .
" ဟဲ့ . . ကိုရင် လာစမ်း ၊ ဟိုပြင်ထားတဲ့ ဆွမ်းအုပ် ထဲက တစ်ယောက်စာ လုံလုံလောက်လောက် ထည့်ပေးလိုက်" လို့ ပြောလိုက်ပါတော့တယ် ။
သူတောင်းစားလည်း ဆွမ်းထုပ်ရသွားတော့ ပြုံးပြုံးနဲ့ ကျောင်းပေါ်က ဆင်းသွားပါတယ် ။
သူတောင်းစား ဆိုသွားတဲ့ လင်္ကာလေးက သိပ်ကို တာသွားတာပါ ။ ဒီလင်္ကာလေးကို အခြေခံပြီး အတွေးလေးချက် တွေးလို့ ရပါတယ် ။
ရှေးက ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုခဲ့လို့ အခုဘဝ ကောင်းနေတယ် ။ ခုဘဝ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ဆက်ပြုနေရင် နောင်ဘဝလည်း ဆက်ကောင်း နေဦးမယ် ။
ရှေးက ကုသိုလ်ကောင်းမှု မပြုခဲ့လို့ အခုဘဝ မကောင်းဘူး ။ ခုဘဝ ကုသိုလ်ကောင်းမှု ဆင့်ကာဆင့်ကာ ပြုနေရင် နောင်ဘဝ ကောင်းမှာပဲ ။
စိတ်နေစိတ်ထားဘက် လှည့်တွေးမယ် ဆိုရင်လည်း ရှေးဘဝ စိတ်ထားကောင်းလို့ ခုဘဝ ကောင်းနေတယ် ။ ခုဘဝ စိတ်ထား မကောင်းရင် နောင်ဘဝ မကောင်းဦးမှာပဲ ။
အတွေးလေးချက်က ဆင့်ပွား ထွက်လာတာပါ ။
လူဆိုတာ သူ့ကံနဲ့သူ ၊ ကိုယ့်ကံနဲ့ကိုယ်ပါ ။
ဥပမာ . . .ဌာန ၊ ရုံး ၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ကိုယ့်ထက် သာနေတဲ့လူ ဆိုတာ ရှိနေတတ်ပါတယ် ။
တကယ်တော့ ကိုယ့်ထက် သာနေတဲ့ သူတပါးရဲ့ ကံကို အားကျရမှာပါ ။ မနာလိုရမှာ မဟုတ်ပါဘူး ။ မနာလိုတဲ့စိတ် ဖြစ်နေတာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ အတွေးအခေါ် မှားနေတာပါ ။
ကိုယ့်ထက်သာတဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့အခါ နှလုံးသွင်း မှန်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ် ။ နှလုံးသွင်းမှားရင် နစ်သထက် နစ်သွားပါလိမ့်မယ် ။
နှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ကတော့ သိပ်မခက်လှပါဘူး ။ အထက်က လင်္ကာလေးကို ပြန်အာရုံပြု လိုက်ရုံပါပဲ ။
"သြော်. . . သူက ရှေးကကောင်းလို့ ခုကောင်းနေတာ ၊ ငါက ရှေးက မကောင်းလို့ ခု မကောင်းနေရတာ ။ သူ့လို ကောင်းအောင် ခုဘဝမှာတော့ ကောင်းအောင်ပဲနေမယ် ။ " လို့ နှလုံးသွင်းပြီး ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ဆင့်ကာ ဆင့်ကာ ပြုနေဖို့ပါပဲ ။
ကုသိုလ်ဆိုလို့ ကျောင်းကြီးတွေ ဆောက်လှူမှ ကုသိုလ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး ။
မနက်အိပ်ယာထတာနဲ့ ဂုဏ်တော်လေးပွား ၊ မေတ္တာလေးပွား ၊ ဝိပဿနာလေး ပွားနေလိုက် ရင်လည်း ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ ကုသိုလ် ဖြစ်နေတာပါ ။
နောက်ငါးပါးသီလကို နေ့စဉ်အထူး စောင့်ထိန်းပြီး ရှစ်ရက် , ဆယ့်ငါးရက် ဥပုသ်နေ့ တွေမှာလည်း ရှစ်ပါးသီလ , ကိုးပါးသီလတွေကို ဝတ်တစ်ခုလို စောင့်ထိန်းသွားမယ် ၊ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း မြင့်မြတ်အောင် တည်ဆောက် သွားမယ်ဆိုရင် မကြာခင်အချိန်မှာ ကိုယ်မျှော်လင့်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ ရလာမှာပါ ။
နောက်တစ်ခု သတိရတာ ပြောရရင် စာထဲမှာ အဆင့်လေးဆင့် ပြထားတယ် ။
ပထမအဆင့်က ဗဟုသုတဖြစ်အောင် တရားနာပါ ။
ဒုတိယအဆင့်က ဖတ်ထားတဲ့ တရားထဲ စာထဲက ဆောင်သင့်ဆောင်ထိုက်တာကို ဆောင်ထားပါတဲ့ ။
တတိယအဆင့်က ဆောင်ထားတဲ့တရားထဲက ကြံစည်စဉ်းစားပါတဲ့ ။
စတုတ္ထအဆင့်က ကြံစည်စဉ်းစားရုံတင် ရပ်မထားဘဲ လက်တွေ့အသုံးချပါတဲ့ ။
လူဆိုတာ တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ ရပ်တည်လို့ မရတာ ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာ သေသည်အထိ ရှိနေမှာပါပဲ ။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမှီပြုပြီး ခံစားချက် မျိုးစုံ ဝင်လာမှာပါပဲ ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို မှီပြီး ခံစားချက် ဝင်လာရင် နှလုံးသွင်း မှန်ဖို့ သိပ်အရေးကြီးပါတယ် ။
ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ထက်သာတဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ ကြုံပြီး မနာလိုစိတ် ဝင်ခဲ့ရင်တော့ အောက်ပါလင်္ကာလေးကို တိုးတိုးလေးသာ ရွတ်ကြည့်လိုက်ပါတော့. . .။
သဗ္ဗမင်္ဂလဓမ္မဒေသနာ ( အရှင်ဝါသဝါဘိဝံသ)
ရဝေနွယ်-အင်းမ (အတွေးများနှင့် မိတ်ဖွဲ့ခြင်း )
( စာ-၂၃-၂၈ )
Credit - ဓမ္မ နှစ်သက်သူ
Labels:အတိတ်က မြိတ်သမိုင်း တရားတော်